China kuBrazil-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Mutsetse Webasa>Maodzanyemba America Line>China kuBrazil
Kuendesa kubva kuChina kuenda kuBrazil
Mazhinji evatengi vedu akavakirwa muBrazil, sakaazova musika wakakosha kwazvo kwatiri. Takanyorerana chibvumirano neari kutakura akadai seCOSCO, OOCL, APL, EMC, MSK, uye HMM. Hukama uhu ngatitipei zvakanaka chaizvo zviyero zvekutakura kana uchiendesa kubva kuChina kuenda kune chero chiteshi muBrazil.
NeSHL sevabatsiri, kutumira zvinhu kubva kuChina kuenda kuBrazil kuchave nyore, iwe uchangoda kusiyira zvinhu zvako pamwe nesu, toita zvimwe. SHL inotarisira kuzova yako yakanakisa kutakura zvinhu kubva China neBrazil. Bvunza mutengo uri nani izvozvi.
Ro-Ro / Kupwanya Bulk Kutumira kubva kuChina kuenda kuBrazil
SHL inogona kupa RORO ROROMAFI BREAKBULK yeiyo chaiyo michina, mota uye zvinorema michina kubva China kuenda kuBrazil Tinogona kupa imwe kumira uye yakagadzirirwa mhinduro.
Kutakura Gungwa Kukutakura kubva kuChina kuenda kuBrazil
Tinogona kupa makwikwi emitoro yemakungwa inokwikwidza, uye mhinduro dzekutumira dzakanakisa, zvichienderana neyako inodikanwa nguva yekutumira kana uchiendesa kubva kuChina kuenda kuchiteshi muBrazil (kunyanya kusvika mukati memahara.
Kutakura Mhepo Kutakura kubva kuChina kuenda kuBrazil
Isu tinosarudza iyo inonzwisisika ndege yekutumira kwako zvichienderana neyako nguva yezvinodiwa. Bansar ndiyo nzira yako yekufambisa yakatakurika yekutakura mhepo kubva kuChina uchienda kuBrazil.
Kuchipa Kukutakura kunobva kuChina kuenda kuBrazil
Izvi zvinoenderana nekuti mangani zvinhu iwe zvaunotumira kubva kuChina kuenda kuBrazil, kana ukasakurumidza nesampuleti diki, unogona kushandisa China Post kana kutaura senge DHL, kana uine zvimwe zvinhu, wozosangana neBansar, iwe unowana yedu yekufambisa yakanaka chiyero kubva kuChina kuenda kuBrazil.
Yakareba / Yakadii Kutakura kubva kuChina kuenda kuBrazil
Door kune Door Kutakura kubva kuChina kuenda kuBrazil
Kunyangwe nezvezvinodiwa iwe pachako kana bhizinesi, tinokwanisa kukupa musuwo kuenda kune imwe yekutumira sevhisi, zvinosanganisira tsika yakajeka muBrazil.
Yako Yakanakisisa Yekutakura Mubatiri kubva kuChina kuenda kuBrazil
Ipa makwikwi emakungwa nemhepo kutakura zvinhu kubva kuChina kuenda kuBrazil.
BARAO DE DZIDZO
Main Airports muBrazil
Governor Jose Richa Airport Senador Nilo Coelho Airport
Sao Paulo-Guarulhos International Airport Hercilio Luz International Airport
Marechal Rondon International Airport Viracopos Yemukati Airport
Metropolitan Area Airport Pinto Martins-Fortaleza International Airport
Augusto Severo International Airport Foz ita Iguacu International Airport
Webhusaiti yeCBP https://www.cbp.gov/ ine ruzivo rwakawanda nezvetsika dzeBrazil nebasa.